Natiijo hordhac ah oo laga soo saaray doorashada Iran - BBC Somali
Image caption Iiraan ayaa dhawaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa.
Natiijada hordhaca ah ee codbixintii doorashada baarlamaanka dalka Iiraan ayaa waxa ay muujineysaa in siyaasiinta qunyar socodka ah iyo kuwa u ololeeya is-baddalka ay si weyn uga guuleysanayaan muxaafidiinta uu loolanka kala dhexeeyo.
Kooxaha is-baddal doonka ah ayaa waxa ay sheegayaan in natiijadani hordhaca ah ay aad uga wanaagsan tahay wixii ay filayeen.
Kooxaha qunyar socodka ah iyo kuwa is-baddal doonka ah ayaa sido kale waxa ay u muuqdaan in ay guul weyn ka soo hooyeen doorashada golaha khubarada oo ah gole muhiim ah oo awood u leh in uu soo magacaabo hoggaamiyaha ruuxiga ah ee waddankaasi.
Guushani ay gaareen shakhsiyaadka doonaya is-badalka iyo in xiriir wanaagsan lala yeesho reer galbeedka ayaa waxaa loo arkaa in ay muhiimad gaar ah u leedahay madaxweynaha dalkaasi ee qunyar socodka ah Xasan Rowxaani.
Warbaahinta Iiraan ayaa waxa ay ammaantay tirada dadka dhiibtay codkooda oo aad u sarreysa, taasi oo lagu qiyaasay in ay ka badan tahay boqolkiiba 60.
Hasayeeshee muxaafidiinta ayaa u arkaya isu soo baxa dadweynaha in ay jawaab u tahay codsiga uu jeediyay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Ayatollah Khamenei.
Doorashooyinkani ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee dalkaasi ka dhaca tan iyo markii ay Taxraan heshiis ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka la saxiixatay quwadaha caalamka, heshiiskaasi oo horseeday in dalkaasi laga qaado inta badan xayiraadihii caalamiga ahaa ee saarnaa.